အကြိုက်ဆုံးပုံကိုရွေးလိုက်ပါ သင့်ရဲ့ တကယ့်အတွင်းစိတ်ကိုပြောပြပေးလိမ့်မယ် - Myanamr Express
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေရှိကြတဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးပုံတစ်ပုံရွေးလိုက်ရုံနဲ့ အဲ့ဒီလူက ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်၊သူ့ရဲ့တကယ့်အတွင်းစိတ်က ဘယ်လိုဆိုတာ တပ်အပ်ပြောဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် တူညီတာများနိုင်ပါတယ်။ကဲ အကြိုက်ဆုံးပုံရွေးပြီးပြီလား..?
သင်က နံပါတ် ၁ ပုံကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ကိုယ်သင်ရော သင့်အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုပါ တန်ဖိုးထားတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။အကူအညီတောင်းရင် ပေးဖို့ ဝန်မလေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့က သင်က အားနာလွယ်တယ်။ကူညီပေးလွယ်လိုက်တာ၊စိတ်ပျော့လိုက်တာလို့ထင်နေပေမဲ့ သူတို့အထင်က မှားယွင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင့်ရဲ့ ကူညီဖေးမမှုတွေကြောင့် သင့်ကိုလည်းတကယ်တန်ဖိုးထားချစ်ခင်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပါပဲ။တစ်ခြားသူတွေက သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တိုင်းကို တန်ဖိုးထားတာကြောင့် သင်ဟာလူချစ်လူခင်ပေါများတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား?
နံပါတ် ၂ ပုံကို အကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ သင်က မှန်လိုကျင့်ကြံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သင်ပေးလိုက်သလို၊သင်တန်ဖိုးထားသလို တစ်ခြားသူတွေကလည်း သင့်ကိုပြန်ပေးစေချင်တယ်။ပြန်တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ၊ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ
နောက်ဆုံး နံပါတ် ၅ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းပြီး အနုပညာဘက်ကိုအားသန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးယဉ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး အထိခိုက်မခံတဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေကို ချပြဖို့တွန့်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်က အောင်မြင်ပါ့မလား၊အသိအမှတ်ပြုခံရပါ့မလားဆိုတဲ့သံသယစိတ်၊တွေဝေစိတ်တွေဖြစ်နေလို့ပါ။သင်လုပ်ရမှာက ကျရှုံးမှာကိုကြောကတဲ့စိတ်ဖယ်လိုက်ပါ။သင့်ရဲ့အနုပညာအရည်အချင်းတွေကို တစ်ခြားသူတွေမြင်အောင် မျှဝေလိုက်ပါ။
January 4, 2019 Pwint Linnမှတ်မှတ်သားသားစကားများနံပါတ္
Previous Post အမျိုးသားတွေမြုံရခြင်း အကြောင်းရင်းများ
Next Post တစ်ကိုယ်လုံး ဖြူဖွေးဝင်းဥသွားစေမယ့် အာလူးပြုတ်နဲ့ ပေါင်းတင်နည်း